ओलीलाई ज्ञानविज्ञानवादी भन्दै बधाई लेख्नेमा उहाँहरू नै अगाडि हुनुहुँदो रहेछ ! चिन्नुहुन्छ ?
नारायण गाउँले । -केही महिना अगाडि खतिवडा सरले पुस्तक आयातमा समेत कर लगाउनुभो ! केही पत्रकार मित्रले विभिन्न तर्क दिएर त्यसको बचाउ र समर्थन गर्नुभो ।
-कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालले मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारबाही गरेको भनेर प्रसंशामा स्ट्याटस लेख्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो । तर कहिल्यै मलको कारोबार नै नगरेका र हरेक ठेक्कामा बदमासी गरेका घरबेटीले नै मल ल्याउने ठेक्का किन र कति कमिशनमा पाएका थिए भन्ने उहाँहरूले लेख्नुभएन । थप दिग्दारी त के छ भने, अझै पनि मलको ठेक्का उनैसँग छ । अनि धरौटी जफत भएको समाचार नि ?
भन्नुहोला, त्यो सही हो । मलमा करोडौंको अनुदान छ । ठेक्काको मोबिलाइजेशन भनेर २०-२५% पहिल्यै झिक्न र बाँड्न पाइन्छ । मल ल्याउनुपर्दैन । अनि सरकारले दुई तीन लाख धरौटी जफत गरेको र ठेक्का तोडेको अभिनय गर्छ, सकियो । ठेक्का दिने पनि आफै, पाउने पनि आफै, अनुदान पड्काउने पनि आफै, मल नल्याउने पनि आफै, कारबाही गरेको अभिनय गर्ने पनि आफै अनि बाँकी ठेक्का पनि आफ्नै ।
धान रोप्ने बेला मल आएन । धरौटी जफत भन्ने समाचार आयो । कहिल्यै नसुनिएको मल पैँचो माग्ने खबर आयो । अहिले गहुँ छर्ने बेला फेरि मल आएन । समाचार आयो, मल नल्याउने त फेरि पनि त्यही ठेकेदार रहेछ । मल त पक्कै आउने छैन तर फेरि कारबाहीको खबर भने आउनेछ र सरकारको फेरि प्रसंशा गर्न भने पाइने नै छ । जय होस् !